Filoha Rajaonarimampianina Hery : “ Gadrao, faizo ireo mpampakatra vidim-bary ” -
AccueilRaharaham-pirenenaFiloha Rajaonarimampianina Hery : “ Gadrao, faizo ireo mpampakatra vidim-bary ”
20/01/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Handray fepetra amin’ny fampiakarana ny vidim-bary ny fanjakana, hamboarina ny kianja mitafo Soavita, hiverina amin’ny laonina 100 isan-jato ny famatsiana herinaratra amin’ny alarobia izao fara-fahatarany, notolorana fanomezana ny tobim-paritry ny zandarimariam-pirenena sy ny toby miaramila any Toamasina noho ny fahasimbana vokatry ny rivodoza AVA. Hatsangana ny ivon-toerana fanofanana “Port Academia Center”, atao vaindohan-draharaha ny fanarenana an’i Toamasina hoy ny Filoham-pirenena, Rajaonarimampianina Hery, raha niverina nitsidika ny tanànan’i Toamasina, omaly.
Tafakatra 800 Ariary ny kapoakan’ny vary nafarana any Toamasina ankehitriny ka mitaraina ny vahoaka. Raha ny tokony ho izy anefa, dia tokony tsy hisy ny fiakaran’ny vidim-bary avy any ivelany hoy ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery. Mahatratra fito alina taonina ny tahirim-bary avy any ivelany efa tonga eto Madagasikara. Vokany, manana ambim-bava hatramin’ny roa volana isika, hoy hatrany izy ary mbola mitohy ny fanafarana. Noho izany, ampy ny tahirim-bary eto amintsika, hoy ny Filoha, raha tonga nijery ireo tahirim-bary avy any amin’ny sambo avy any ivelany any amin’ny seranan-tsambon’i Toamasina. Mbola tsy mitsahatra tonga ny sambo mitondra izany amin’izao fotoana izao. Noho izany, niantso ny manam-pahefana any an-toerana hanafay, hanasazy ireo mpanararaotra manondrotra mihoapampana ny vidim-bary. “Ireo izao misy sambo roa izay mitondra vary any ho any amin’ny 44 000 taonina no tonga amin’izao fotoana izao, ankoatra izay efa hananantsika. Raha jerena izany ny fitambarambe ny tahirim-barintsika amin’izao fotoana izao dia misy hatrany amin’ny 70 000 taonina. Izany hoe raha tsy etsehina izay dia mahatratra hatrany amin’ny roa volana kanefa dia mbola mandeha foana ny fanafarana. Tena manome toky ny vahoaka malagasy aho fa raha ny vary izay ilaina dia ampy sy misy amin’izao fotoana izao, ary ataon’ny fitondram-panjakana vaindohan-draharaha ny manara-maso izany ka tsy tokony hisy ny fanararaotana mihoampampana amin’ny vidin’ny vary, indrindra ny vary hafarana”, hoy ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina.
Ny zava-misy mantsy, dia ataon’ny olona mitovy tantana ny vary hafarana sy vary gasy nefa samy hafa ireo, satria ny vidin’ny vary hafarana dia latsaka lavitra noho ny vidiny vary izay vokatra eto an-toerana. Noho izany, nanome toromarika ireo tompon’andraikitra rehetra ny Filoha, “araho maso, faizo, gadrao ireo olona manararaotra sy manafim-bary, indrindra ao anatin’izao fahavoazan’ny vahoaka izao. Tsy azo ekena izany malagasy mambotry ny Malagasy ohatra azy, indrindra ny vahoaka madinika sy ny vahoaka mahantra ohatra izany. Tsy azo ekena izany, ary adidintsika rehetra mandray ny fepetra izay mifanitsy amin’izay zavatra izay.” Nambara hatrany fa, tsy ao Toamasina ihany fa manerana an’i Madagasikara no hahazo tombontsoa amin’ny fahatongavan’io vary io. Ka ny iray amin’ireo sambo mitondra ny ampahan’ny vary mandeha mihazo an’i Toliara amin’izao fotoana izao. Misy koa ireo vary amin’ny kaontenara izay efa miparitaka any amin’ireo seranan-tsambo hafa, tahaka an’ Antsiranana sy Mahajanga. Mila fandaminana anefa izany rehetra izany ary mila faharetana, hoy ny Filoha nandritra ny fitokanana ireo fotodrafitrasa tany amin’ny seranan-tsambon’i Toamasina, omaly. Misy ny toeram-pitsaboana sy fanaovana fitiliana ara-pahasalamana, ary ny biraon’ny polisy, na “commissariat special de la police”, izay fotodrafitrasa miorina ao anatin’ny seranan-tsambo avokoa ireo rehetra ireo.